Podcast Avy Any Chile Mba Hanakaran’ny Rehetra ny Kintana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Febroary 2017 11:44 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Français, Português, عربي, Swahili, Italiano, Español
Pikantsary avy amin'ny andian-tantara “San Pedro de Atacama, tsy misy olona mahita azy “, azo jerena ao amin'ny Youtube amin'ny teny espaniola.
Efa hatry ny ela i Chile no nanana ny fomba fandinihana ny Kintana , sady tia miresaka izany. Izany no fototra nanombohan'ny AstroBlog (ahitana dikanteniny amin'ny teny anglisy ihany koa ao amin'ny Astronomy Et Al) an'i Ricardo García Soto, mpamokatra sarimihetsika sady mpanatontosa fandaharana ao amin'ny fahitalavitra, ny asany momba ny habakabaka. Astronoma sady mpampianatra siansa i García Soto ka maniry hampanao ny habakabaka hahaliana ny olona rehetra. Ny fikasany: Hanorina tetezana fifandraisana sy hampahafantatra ireo olona ireo ny tsikaritra ara-tsiantifika, sy hamoha azy ireo ny saina ho liana sy hikarokaroka mampiavaka ny tontolon'ny siansa:
Ny hahita ny fahazazana ao amintsika sy ny fahatalanjonana amin'ny zava-mahagaga eny amin'ny HABAKABAKA no faniriako lehibe indrindra ho an'ny rehetra .
Vonona ao amin'ny iTunes sy Ivoox ny podcast [fandraisam-peo] ary manampy azy ny fantsona YouTube izay natokana hanazavana bebe kokoa amin'ny antsipiriany ny fomba isan-karazany fandinihana sy ny fianarana astronomia. Ohatra amin'izany ny lahatsariny Ahoana ny fomba hianarana astronomia izay ahafahantsika manaraka ny fitsidihana nataon'i García Soto miaraka amin'ny mpianatra sy ny mpikaroka ao amin'ny tontolon'ny fianarana ambony natokana ho an'ny fianarana ny habakabaka. Tsy mampifanakaiky antsika amin'ny siansa fotsiny izany fa mamela antsika ihany koa hamantatra ny fiainan'ireo izay manao izany isan'andro .
Anisan'ny mahatonga ireo lahasary ho mahaliana ny famahana ny misiterin'ny tontolon'ny astronomia, mampiseho azy amin'ny lafiny hafa ho toy ny taranja ara-tsiansa izay tsy mitaky fahaizana lalina, fa mitaky fanoloran-tena, ezaka ary fiaraha-miasa kosa.
Mitantara ireo fitsangatsanganana arahim-pamakivakiana toeram-baovao sy fizarana ireo toro-hevitra amin'ny fomba hibanjinana ny lanitra avy ao Chile ny traikefa hafa., toy ny fitsangatsanganana tany amin'ny tany ngazan'i Atacama, … ary manampy izany ihany koa ny torohevitra ho an'ireo izay te hanatontosa lahatsary bilaogy: